Wondershare dr.fone समर्थन केन्द्र
dr.fone टुलकिट समर्थन केन्द्र
कुनै कुरा dr.fone टुलकिट प्रयोग गर्दा के समस्या तपाईं मुठभेड, हामी तपाईंले तिनीहरूलाई बाहिर काम गर्न मद्दत गर्न सधैं यहाँ छन्।
सामान्य सोधिने प्रश्न
उत्पादन सोधिने प्रश्न
दर्ता कोड पुन: प्राप्त
हामीलाई तेज तरिकामा तपाईंलाई सहयोग गर्न मद्दत गर्न, कृपया निम्न 2-3 प्रश्नहरूको जवाफ, र हामी सही सेवा टोलीलाई मार्गदर्शन हुनेछ। (प्राविधिक सहायता, ग्राहक समर्थन वा बिक्री)
हामी तपाईलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छौ?
म केही प्राविधिक प्रश्न म खरिद उत्पादन बारे।
म बारेमा कुनै प्रश्न छ , डाउनलोड स्थापना वा सक्रिय, दर्ता कोड मेरो उत्पादन।
म आफ्नो बारेमा जान्न चाहन्छु लाइसेन्स, उन्नयन र रकम फिर्ता नीतिहरू।
म सिर्फ छु सुरु रही र म केही प्रश्न छ।
म उत्पादन बारेमा केही प्रश्नहरू छन् कार्यहरु र सीमा मेरो खरिद अघि।
म पहिले नै खरीद , तर म मेरो अर्डर बारेमा प्रश्नहरू ।
म उत्पादन प्रबन्धक लागि सुझावहरू।
म चाहन्छु मेरो समीक्षा साझा अन्य ग्राहकहरु संग।
कृपया तल तपाईंको विशिष्ट आवश्यकता चयन गर्नुहोस्।
मेरो प्रश्न मेरो आईफोन, आईप्याड र आइपड टच फाइलहरू पुन बारेमा छ।
iOS को लागि dr.fone टुलकिट
Android को लागि dr.fone टुलकिट
म खरिद उत्पादन बारे केही प्राविधिक प्रश्न छ।
म मेरो खरिद अघि उत्पादन कार्य र सीमा बारे केही प्रश्नहरू छन्।
Wondershare डा, iOS को लागि Fone
Android को लागि Wondershare Dr.Fone
मेरो प्रश्न मेरो Android स्मार्टफोनहरू फाइलहरू recoverying बारेमा छ (सैमसंग, आदि।)
माथिको कुनै पनि होइन, कृपया कार्यक्रम चयन तपाईं रुचि राख्नुहुन्छ
कृपया प्रश्न र विशेषज्ञहरूबाट जवाफ प्राप्त PDFelement समुदाय।
कृपया सर्वश्रेष्ठ तपाईंको समस्या वर्णन गर्ने एक श्रेणी चयन गर्नुहोस्।
म कार्यक्रम म यसलाई खरीद अघि मेरो डाटा रिकभर कसरी काम गर्छ जान्न चाहन्छु।
हाम्रो सफ्टवेयर वर्णन ती जस्तै आइओएस errros फिक्सिंग को सक्षम छ। यो अपरेटिङ सिस्टम मरम्मत को छ (जस्तै रिकभरी मोड वा एप्पल लोगो लुपमा फँस) र सामान्य सञ्चालन स्थिति फिर्ता उपकरण ल्याउन हो। यो तपाईंको डाटा प्रभावित बिना गर्न सकिन्छ। यो केवल हाम्रो सफ्टवेयर को भुक्तानी संस्करणको काम गर्नेछ एक सुविधा छ, र त्यहाँ काम गर्नेछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन।
उत्कृष्ट, समस्या हल! म प्रत्यक्ष सहयोग आवश्यक छ। शुरू
हामी हाम्रो ग्राहकहरु को राय मोल, र तपाईं आफ्नो Wondershare उत्पादन आफ्नो अनुभव बारे हामीलाई भन्नुहोस् स्वागत छ। हामीलाई आफ्नो विचार, अनुरोध, वा टिप्पणी पठाउनुहोस्। हामी सिधै आफ्नो प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया गर्न सक्नुहुन्छ हुनत छैन, हामी हाम्रो उत्पादन र सेवा सुधार गर्न प्रयोग गर्नेछ। तपाईं एक प्राविधिक वा समर्थन अवस्था छ भने, त्यसपछि दयालु हाम्रो समर्थन केन्द्र प्रयोग गरेर हामी सहायताको संग प्रतिक्रिया गर्न सक्षम हुनेछ रूपमा सम्पर्क
सुझाव वा कार्यक्रम सुविधाहरू लागि आवश्यकताहरू
उत्पादन बारेमा प्रशंसा
हामी साँच्चै हाम्रो उत्पादनहरु लागि आफ्नो टिप्पणी र सुझाव मूल्यांकन गर्छौं। तपाईंको प्रतिक्रिया समीक्षाको लागि हाम्रो विकास टोलीलाई फर्वार्ड गरिनेछ र यदि यो भविष्य विज्ञप्ति थप गर्न सकिन्छ हेर्न। हामी फिर्ता प्रतिक्रिया गर्न असमर्थ छौं हुनत, हामी हामी गर्न सक्छन् सबै भन्दा राम्रो उत्पादन गर्न हामी गर्न सक्छन् सबै गर्नेछ भन्ने थाहा छ, र तपाईंको प्रतिक्रिया हामीलाई एक महान सम्झौता गर्न मद्दत गर्नेछ।
तपाईं हाम्रो उत्पादनहरु को एक साथ सहयोग चाहिन्छ भने, हाम्रो समर्थन केन्द्र मा हाम्रो समर्थन टोलीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
आफ्नो समय को लागि धन्यवाद, र समर्थन!
(अधिकतम अपलोड फाइल साइज: 60 एमबी)
भुक्तानी विधि PayPal क्रेडिट कार्ड
सञ्चालन प्रणाली विन्डोज 10 (32bit) विन्डोज 10 (64bit) विन्डोज 8 (32bit) विन्डोज 8 (64bit) विन्डोज7(32bit) विन्डोज7(64bit) Windows Vista (32bit) Windows Vista (64bit) Windows XP (32bit) 10.10 (योसेमाइट) 10.9 (मैवरिक्स) 10.8 (पहाड सिंह) 10.7 (सिंह) 10.6 (हिम चितुवा) 10.5 (चितुवा) 10.4 (बाघ) 10.11 (कप्तान) 10.12 (सियरा) अन्य
उत्पादन संस्करण विन्डोज (7.0.2) विन्डोज (7.1.0) विन्डोज (7.2.0) विन्डोज (7.3.0) म्याक (6.1.0) म्याक (6.9.0) म्याक (7.0.0) अन्य
सञ्चालन प्रणाली विन्डोज 10 (32bit) विन्डोज 10 (64bit) विन्डोज 8 (32bit) विन्डोज 8 (64bit) विन्डोज7(32bit) विन्डोज7(64bit) Windows Vista (32bit) Windows Vista (64bit) Windows XP (32bit) 10.10 (योसेमाइट) 10.11 (योसेमाइट) 10.9 (मैवरिक्स) 10.8 (पहाड सिंह) 10.7 (सिंह) 10.6 (हिम चितुवा) 10.5 (चितुवा) 10.4 (बाघ) 10.11 (कप्तान) 10.12 (सियरा) अन्य
एन्ड्रोइड डाटा रिकभरी एन्ड्रोइड एसडी कार्ड डाटा रिकभरी एन्ड्रोइड असफल स्क्रिन डाटा रिकभरी एन्ड्रोइड लक स्क्रिन हटाउने
मलाई यो समाधान इमेल
अझै पनि सहयोगको आवश्यकता पर्दछ?
अनुरोध गरिएको जानकारी प्रदान गर्न र हामी हाम्रो समर्थन एजेन्ट को एक साथ जडान हुनेछ।
egiPhone6, सैमसंग ग्यालेक्सी नोट III
egiOS 9.0, एन्ड्रोइड 5.1